Bipin Karki – An Online Entertainment News Portal
January 10, 2019 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेता विपिन कार्कीलाई भर्सटायल अभिनेताको रुपमा चिनिन्छ । उनको स्टारडम छ या छैन, त्यो मापन दर्शकले नै गर्लान् । तर, विपिन कार्कीको अभिनयबाट प्रभावित दर्शक र समिक्षक भने धेरै छन् । छड्केदेखि सुरु भएको […]
गाई गोठाले बने बिपिन कार्की – गोपी ट्रेलर सार्बजनिक
December 20, 2018 sutraentertainment 0
फिल्म गोपीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । काठमाण्डौमा एक कार्यक्रम गर्दै निर्माण टिमले ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो । यसअघी फिल्मको एक गीत र पोष्टर सार्वजनिक भइसकेको छ । फिल्ममा विपिन कार्की, सुरक्षा पन्त र वर्षा […]
December 7, 2018 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के ? प्रविधीमा भुल्दा हामीले कथा विर्सिएका छौ । आफ्नो मौलिक कथामा भिज्न छाडेर विदेशी प्रविधीसँग विदेशी कथा घुलाउँछौ र भन्छौ–‘नेपाली फिल्म नै चल्दैन’ । तर, के हामीले दर्शकलाई […]
पारिश्रमिक मोटो लिने, फ्लपको जस चाहिँ नलिने ?
October 8, 2018 Tulasa Karki 0
फिल्म चल्नकुन कुन कुराले काम गर्छ । कथा, हिरो, हिरोइन, निर्देशक, गीतसंगीत आदि आदि । एउटा सिनेमा धेरै मिहेनिती मानिसहरुको कडा लगावको प्रतिफल पनि हो । तर, सिनेमाको व्यापारमा यत्ती कुराले मात्र हुँदैन । सिनेमा […]
‘नाका’मा विपिन देखिए यस्तो अवतारमा(भिडियो सहित)
November 6, 2017 Keshab Khadka 0
२० कात्तिक २०७४,काठमान्डौ । विपिन कार्की अभिनित चलचित्र ‘नाका’ को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । टिजरमा विपिन भिन्न भूमिकामा देखिएका छन् । विपिन पशुपति प्रसादका ‘भष्मे डन’ले सेमत प्रख्यात छन । चलचित्रको टिजरमा विपिनको […]